सालिकमाथि फूल राख्दैमा शहीदको सपना साकार हुन्छ र ? « News24 : Premium News Channel
सालिकमाथि फूल राख्दैमा शहीदको सपना साकार हुन्छ र ?
प्रकाशित मिति : Jan 29, 2021
देश र जनताको अधिकारका लागि जीवन आहुति दिने शहीदहरुको सम्झनामा आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी शहीद दिवस मनाइँदै छ ।
नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउन जहानियाँ राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था तथा तानाशाही राजतन्त्रविरुद्ध प्रजातान्त्रिक क्रान्ति एवं लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवनको वलिदान गरेका वीर सपूतहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाइँदै आएको छ ।
वीर शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ र लखन थापामगरको संघर्षमय जीवन र वलिदानको गाथा र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अरू योद्धाहरूको योगदानमा शहीद दिवस मनाइएको हो । निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरूद्ध आफ्नो ज्यानको बलिदान गरेका वीर शहीदको स्मरणमा माघ १० देखि १६ गतेसम्म ‘शहीद सप्ताह’ मनाइँदै आएको छ ।
वि.सं. १९९७ माघ १० गते निरंकुश राणा शासनविरुद्धमा नेपाल प्रजापरिषद् स्थापना गरी जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारका लागि क्रान्ति गर्न प्रेरित गर्ने शुक्रराजलाई टेकुस्थित खरीको रूखमा झुन्डयाएर हत्या गरिएको थियो । यस्तै, सोही वर्ष माघ १३ गते सिफलमा धर्मभक्तलाई झुन्ड्याइएको थियो भने माघ १५ गते दशरथ चन्द र गंगालाललाई शोभा भगवतीमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
आज सपुतहरुले ज्यान गुमाएको पनि ८० वर्ष पुगिसकेको छ । तिनै वीर योद्धाहरुले देखाएको बाटोमा आज नेपालीहरु लागेको हुँदा देशमा ठूलो परिर्वतनहरु आएका छन् । १० वर्षे माओवादीको सशस्त्र जनयुद्ध,२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनले निरङ्गकुश राजतन्त्र ढलिसकेको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ ।
राणा शासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको दरिलो जगको केन्द्रविन्दु भनेको तिनै वीर सहिदहरु नै हुन् । वीर सपुतहरु जसले आफ्नो परिवारको माया र स्नेहलाई त्याग गरी जीवनलाई आहुति दिने र राणाशासनको अन्त्य गर्न र देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि अथाह गरे ।
तिनै वीर योद्धाहरुको फोटोमा माल्यापर्ण गरी आज राजनीतिक दलहरुलेदेखि विभिन्न संघसंस्थाहरुले शहीद दिवस मानाउने गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लैनचौरस्थित शहीद स्मारकमा ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरे । उने शहीदको सपना साकार पार्नकै लागि सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए ।
‘जुनै जोगि आएपनि कानै चिरेको’ भने झैँ जुनसुकै दलको सरकार आएपनि शहीदको सपना साकार गर्ने सरकार क्रियाशील रहेको बताउछ । वास्तवमा भन्ने हो भने शहीदका सपना विपना बनाउने साहस कुनै पनि पार्टीको सरकारले गरेको छैन । केवल बतासे गफ, चमेरे चरित्र र छेपारे रङ देखाउने शहीदको सपना विपनामा परिणत गर्न पनि सकिँदैन ।
आज देशमा राजनीतिक दलहरु शहीदको सपना विपनामा परिणत गर्नभन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई शहीद घोषणा गर्न थालेको पाइन्छ । दल विशेष वा दलका नेताका संरक्षणमा रहेका गुण्डाहरू अकालमा मारिए पनि सरकारले शहीदको मान्यता दिन थालेपछि सच्चा शहिदको अवज्ञा हुन थालेको छ ।
खासगरी लोकतन्त्र स्थापनापछि सरकारले सडक प्रदर्शनको दबाब र जुन पार्टी सरकार सत्तामा गयो आफ्ना कार्याकर्तालाई सहिद घोषणा गर्ने प्रवृत्ति छाएको छ । सहिद घोषणा गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष आफूअनुकूल शहितको संख्या थप्दै गएको छ । देशको लागि बलिदानी दिने भन्दा पनि आफ्नो पार्टीका लागि सडकमा आगो बाल्ने, टायर जलाउने, तोडफोड गर्नेहरुलाई शहिद घोषण गदै आएको पाइन्छ ।
पछिल्ला समय कर्मचारी सहिद, धार्मिक सहिद, पत्रकार सहिद, गाडीको ठक्करबाट मरेका खोलामा बगेरमा मरेका, हिडदा हिड्दै मरेकाहरू पनि सहिदको सूचिमा थपिएका छन् । कहि केही झगडामा कसैको मृत्यु भयो भने पहिलो माग भनेको मृतकलाई सहिद घोषणा माग गर्छन् । अनि मात्रै लाख क्षतिपूर्तिको कुरो हुन्छ ।
माओवादीको नाममा मारिने सहिद, एमालेको नाममा मारिने सहिद, कांग्रेसको नाममा मारिने सहिद, मधेशीको नाममा मारिने सहिद, जनजातिको नाममा मारिने सहिद, दलितको नाममा मारिने, धर्मका नाममा मारिने पनि सहिद । जो जसरी मारिए पनि सहिद । हजारौं हजार शहिद घोषणा भएको देशमा कसलाई कसरी कुन रूपमा शहिद मान्ने ? सबै दलका नेताहरु आफ्ना झोले शहीदको पछि लागेपछि ती वीर शहीदहरुको सपना कसरी साकार हुन्छ ?
यदि शहीदकाे सपना साच्चै विपनामा परिणत गर्ने हाे भने दिलदेखि नै शहीदले देखाएकाे बाटाेमा अग्रसर हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र एक अर्काको सम्मान हुने गरी समाधान गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड, तराइमा बस्ने सबै जातजाति समुदाय, भाषा, धर्म, लिंगको समान गर्नुपर्छ । सबैलाई उनीहरूकाे समान अधिकारकाे प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, सबै अमर शहीदहरूमा हार्दिक श्रद्धासुमन !
संसद विघटन हैन, हाम्रै जिन्दगी विघटन भएजस्तो !
खड्गप्रसादको सत्तालिप्सा : असंवैधानिक काममा हामी किन चुप ?
१६ वर्ष अगाडि आजकै त्यो दिन, जेल भत्काएर बाहिर निस्किँदाकाे एक अपूर्व अनुभूति
access_time 8:02 am
सप्तकोशीमा उच्च बाँध बनाउन भारतको एकतर्फी जोड
access_time 8:01 am
access_time 7:56 am
काठमाडाैं, २० फागुन । महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा आउने भक्तजनलाई स्वच्छ वातावरण दिने उद्देश्यले फागुन २२ र
काठमाडौं, २० फागुन । भारतका उर्जामन्त्री आरके सिंहले गत साता दिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा कोसी उच्च
काठमाडौँ, २० फाल्गुन । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा थुनामा